> Resource> égwu> otú nyefee ngwa site Samsung Galaxy S2 ka S4
Na nso nso kwalite si Samsung Galaxy S2 ka S4, ma ugbu a, na-scratching gị isi nyefee ngwa n'etiti ha. Ọ bụ ezie na ngwa ọdịnala na-azọpụta na SD kaadị, ị nwere ike kpọmkwem idetuo ha si S2 na mado ka S4, dị ka ị nyefee music, videos na photos. Nbudata otu ngwa S4 nwekwara adịghị ezi echiche, mgbe nile, ọ ga-ewe gị ogologo oge, karịsịa mgbe ị nwere nza nke ngwa ọdịnala na-ebudatara. Mgbe ahụ, bụ n'ebe a ụzọ ka i nwee ike na-adị mfe nyefee ngwa site Samsung Galaxy S2 ka S4?
Azịza bụ maa Ee. Ị pụrụ ime ka ọ effortlessly mgbe i nwere ọkachamara ekwentị transfer ngwá ọrụ aha ya bụ na Wondershare MobileTrans (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-enyere nyefee niile ngwa ọdịnala na gị Samsung Galaxy S2 ka S4 na a click. E wezụga S2 na S4, ekwentị transfer ngwá ọrụ na-arụ ọrụ zuru okè na S3, Rịba ama 3/2 na ndị ọzọ Samsung ngwaọrụ, LG, Sony, Motorola na na.
3 nzọụkwụ nyefee ngwa site Samsung S2 ka S4
Download ekwentị transfer ngwá ọrụ na n'elu buttons na-eso nduzi n'okpuru. Ebe a, anyị na-na Windows version dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na-agba ọsọ ekwentị transfer ngwá ọrụ na kọmputa
Na-agba ọsọ ekwentị transfer ngwá ọrụ na Windows na kọmputa na ya doro anya na ọrụ-kensinammuo isi window ga-apụta. Site na ịpị Malite, ị na-ekwentị transfer window.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ Samsung Galaxy S2 na S4 na kọmputa
Jikọọ abụọ Samsung igwe na kọmputa site ịkwụnye USB cables. Ozugbo ha na-ejikọrọ ọma, ekwentị transfer ngwá ọrụ ga iṅomi ha, na-egosi ha na ya na isi window.
Gị Samsung Galaxy S2 e gosiri na ekpe panel, na S4 ke ziri ezi. Tụgharịa n'etiti ha na-eji na-agbanwe ha ebe.
Nzọụkwụ 3. Nyefee ngwa site S2 ka S4
Dị ka screenshot egosi, na ị na-enwe ike nyefee kọntaktsị, kalinda, ederede ozi, music, videos, photos, oku na ndekọ nakwa dị ka ngwa ọdịnala. Site na ndabara, ha niile na-enyocha. Nke ahụ bụ ikwu, ị nwere iwepu akara tupu ndị ọzọ faịlụ mgbe nnọọ na ị chọrọ ịkwaga ngwa site S2 ka S4.
Mgbe ahụ, pịa Malite Copy na-amalite ngwa nyefe. Ọ ga-ewe gị a obere oge. N'ezie, ọ kpam kpam na-adabere na olu nke ngwa ọdịnala na gị S2. Mgbe ngwa transfer-abịa na njedebe, ị nwere ike pịa OK rụchaa ya.
Ugbu a, ị na-ahụ otú idetuo ngwa S4 si S2. Ọ bụ incredibly mfe, ọ bụghị ya? N'ezie, e wezụga ngwa transfer n'etiti S2, S4 na ndị ọzọ gam akporo ngwaọrụ, ị nwekwara ike nke na-akpụ akpụ data si Nokia Symbian ngwaọrụ Android ngwaọrụ, a na-edegharị Android data ka iOS ngwaọrụ, ịmafe data si Nokia Symbian ngwaọrụ iOS ngwaọrụ, na ndị ọzọ.
Otú nyefee SMS, ngwa ọdịnala, Media, oku na ndekọ, Kalinda na Ndi ana-akpo si gam akporo